Momba anay - Beijing Landwell Electron Technology Co., Ltd.
Tsy manohana tenifototra horonan-tsary ny browser-nao.
Miaraka amin'ny renivohitra 20 tapitrisa voasoratra anarana, Landwell dia niorina tany Beijing tamin'ny taona 1999 ary manarona ny velaran'ny birao 5000 metatra toradroa. Izy io dia marika fanta-daza amin'ny indostrian'ny fiarovana ary ny filoha lefitry ny China Security Association. Tamin'ny dingana voalohany, ny LANDWELL dia nivoatra haingana miankina amin'ny fanavaozana sy ny fametrahana ny zony hanana fananana ara-tsaina feno sy marika tsy miankina "Landwell" vokatra famaritana mandeha ho azy finday. Izy io dia nanangana ny Guard Tour System lehibe indrindra sy ny Intellect Key Management System avo lenta sy mitarika orinasa miaraka amin'ny R&D, famokarana, varotra ary aorian'ny fivarotana. Hatramin'ny 2003, ny landwell dia nanangana sampana sy birao manerana ny firenena, any Shanghai, Shenzhen, Nanjing, Hangzhou, Wuhan,
Changsha, Zhengzhou, Xi'an, Chengdu, Yantai, Shenyang, Xinjiang sns, ivon-toerana R&D roa ary ivon-rindrambaiko iray. Raha ny fanadihadiana statistikan'ny fampahalalam-baovao tany an-tsaha, ny vokatra Landwell eny an-tsena sy ny haitao eo an-tsaha dia nanjary No.1 nandritra ny taona maro tany Chine ary laharana voalohany manerantany koa. Ny vokatra dia misy ny fisafoana ny mpiambina, ny rafitra fisafoana manan-tsaina, ny rafitra fisafoana indostrialy, ny rafitra fitantanana fanalahidy manan-danja, ny fidirana amin'ny lalan-drà avo lenta, ny vokatra an-trano manohitra ny halatra. Miaraka amina karazana vokatra sy haitao farany, ny entantsika dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 50 toa an'i Etazonia, Alemana, UK, France, Russia, Japan, Brazil, Singapore, South Africa, Poland, Korea Selatan sns. .
Hatramin'ny 1999, Landwell dia manana tantaram-pandrosoana 16 taona; Voatanisa ho iray amin'ireo singa mpamolavola ny "National Standards of Guard Tour System",
Lehiben'ny lefitry ny Fikambanana Fiarovana any Shina Ilay orinasa malaza manerantany amin'ny sehatry ny famantarana azy ho azy.
Orinasa manan-kery miaraka amin'ny Pricing Right of Guard Tour System;
Marika fiarovana malaza any Shina.
Safidy voalohany amin'ny rafitra fanaraha-maso fiarovana, rafitra fitantanana fanalahidy manan-tsaina;
Miorina amin'ny fahitsiana: orinasa maharitra dia miorina amin'ny fahatokisana.
Amim-pahatsorana ho an'ny vahoaka: ny hatsaran'ny zanak'olombelona, ​​ny fototry ny orinasa. Izahay rehetra dia manizingizina amin'ny fandinihana ny fitokisana sy ny fitandroana ny fahatokisana ny mpanjifa, ny mpiara-miasa. Sarobidy ny vola, fa ny fahatokisana no avo kokoa.
Kabinetra fitantanana lehibe, Vata fanalahidy mihantona, Rafitra fitantanana boaty kely sy lakile, Ny boaty ho an'ny fanalahidy fanaraha-maso, Kabinetra fitehirizana lehibe, Kabinetra lakile azo mihidy,